NK | धरानमा फैलियो डेंगुको महामारी, ७३ जना संक्रमित भेटिए
धरानमा फैलियो डेंगुको महामारी, ७३ जना संक्रमित भेटिए
पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने प्राणघातक रोग डेंगु धरान उपमहानगरमा महामारीका रुपमा फैलिएको छ। पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याउँदा डेंगुको महामारी फैलिएको स्थानीयको गुनासो छ।
धरानमा अहिले ७३ डेंगुका बिरामी भेटिएका छन्। उनीहरुको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पताल धरानमा उपचार भइरहेको छ। प्रतिष्ठानमा ६० जना र विजयपुरमा १३ जनाको उपचार भइरहेको छ। ७३ बिरामीमध्ये एकजना इटहरीका र अन्य ७२ धरानकै छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका निर्देशक प्रा.डा गौरीशंकर साहले धरानमा ६० जनामा डेंगुको समस्या देखिएको बताए।
प्रतिष्ठानमा आएका एक सय १४ बिरामीको परीक्षण गर्दा ६० जनामा डेंगू देखा परेको उनको भनाइ छ। विजयपुर अस्पतालमा १३ जना डेंगु बिरामीको उपचार भइरहेको निर्देशक प्रभाव खतिवडाले जानकारी दिए।
धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले उपमहानगरपालिकामा फगिङ मेसिन नहुँदा तत्काल खरिद गरी डेंगू नियन्त्रणको काम संचालन गर्ने बताइन्। बीपी प्रतिष्ठानले उपमहानगरलाई दुईवटा फगिङ मेसिन उपलब्ध गराएको निर्देशक साहले बताए।
धरान १५ का वडाअध्यक्ष नरेशकुमार इवारमले वडामा ३० डेंगू रोगी भेटिएको बताए। उनले वडामा डेंगू रोगको प्रकोप फैलिएपछि स्वास्थ्य प्राविधिक परिचालन गरी नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
पोथी लामखुट्टेले पानीमा अण्डा पारेर बच्चा निकाल्ने बेलामा मान्छेलाई टोकेपछि बिरामी हुने बीपी प्रतिष्ठान धरानका सहायक प्रवक्ता डा. अशोक ऐरले जानकारी दिए। लामखुट्टेले टोकेपछि सुरुमा ज्वरो आउने, शरीरमा दादुरा जस्ता फोका आउने, लिभर पुल्ने र पेटमा पानी जम्ने र गिजाबाट रगत आउने, शरीर दुख्ने लक्षय देखिने उनले बताए। पोथी लामखुट्टे सफा पानीमा मात्र बस्ने भएकाले घरवरपर पानी जम्न दिनु नहुने उनको भनाइ छ।
डेंगुको समयमा उपचार नभए बिरामीको ज्यान खतरामा पर्ने भएकाले तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बीपी प्रतिष्ठान माइक्रोबाइलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. बसुधा खनालको सुझाव छ।
सुनसरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रवबहादुर खड्काले धरानमा महामारीका रुपमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न उच्च सर्तकर्ता अपनाइको बताए।